MMJ iyo Kal-fadhigii 8aad Ee Golaha Xildhibaanada - Cakaara News
MMJ iyo Kal-fadhigii 8aad Ee Golaha Xildhibaanada
Jigjiga (cakaaranews)Axad 16ka April 2017. Waxaa Saaka si habsamileh uga furmay Hoolka shirarka ee Xafiiska Arrimaha Haweenka DDSI Kalfadhigii 8aad Ee Golaha Xildhibaanada Mamulka Magaalada Jigjiga Kaasoo ay kasoo Qaybgaleen Dhamanba Xildhibaanada MMJ.
Hadaba, kalfadhigan ayaa waxaa ugu horayn furay Afhayeenka Golaha Xildhibaanada MMJ Mudane Axmed Saalax Nur oo Halkaas Ka soojeediyay ajandayaasha kalfadhigan isagoo sheegay in kalafadhigani yahay kii 8aad islamarkaana ay ajandayaashu yihiin sidan:- 1) ansixinta hadal qoraalkii kalfadhigii 7aad, 2) ansixinta warbixinta 9ka bilood ee SM 2009T.I 3)ansixinta wakaalada UPSNP ee MMJ 4)ansixinta ULGDP ee dib loo habeeyay 5) ansixinta Gudiyada Joogtada ah ee Golaha xildhibaanada MMJ. Kadibna xildhibaanada ayaa ajandayaashan iskuwada raacay, waxaana la guda galay kahadalkii ajandayaashan iyo ansixintoodii,
Kadibna, Kusimaha Maayorka MMJ ahna Maareeha Guud ee MMJ Mudane Fadxi Shukri Axmed ayaa halkaas kasoojeediyay Warbixintii 9ka Bilood ee Waxqabadka SM 2009 T.I isagoo si wayn uga hadlay dhanka waxqabadka adeegyada horumarineed ee biyaha, waxbarshada, caafimaadka iyo beeraha iyo waliba adeegyada kaabayaasha dhaqaale ee uu ugu horeeyo dakhligu.
Su’aalo iyo talobixino kadib, xildhibaanada ayaa codbuuxa oo gacantaag ah ku ansixiyay warbixintan uu soo bandhigay masuulku. Iyadoo dhamaanba ajandayaashan korka ku xusan ay xildhibaanada MMJ ay codbuuxa ku ansixiyeen.
Iskusoowada duuboo, kalfadhigan ayaa kusoodhamaaday jawi wanaagsan oo farxadi kudheehan tahay.